‘Cadho Waalid’: Maanso Abwaan Xasan dhuxul Laabsaalax – HormoodNews
07/03/2017 11:56 pm by HormoodNews Views: 412
‘Nimaad Dhashay Kuma Dhalin’ Waxaa la yidhi Soomaalidu been way sheegtaa, been se ma maah-maahdo. Murtidaas, waxaan ku xusuustay oo Marag u ah tixda Cadho Waalid ee Abwaan Xassan Dhuxul ‘Laabsaalax’, uu dhawaan curiyay, taasi oo soo baxday Iidii Soonfureed ee dhaweyd, waxaana ku ladhan sheeko dareen-taabad leh.
Qisada iyo maansada ka dhalatayba waxay isa sanaaniyaan hal-qabsiga ah, ‘Nimaad dhashay kuma dhalin’. Waanay is buuxinayaan marka aad u fiirsato ee aad u dhacdo macnaha.
Inta aanan tixda soo fool-tabinin aan ku horeeyo gogol-dhiga Abwaan Xassan ku balaysimay curashadeedda ama sababta dhacdadda ay ka dhalatay curinta maansadani.
Waxaanu yidhi abwaan Laabsaalax “Magaalada Ankara ee dalka Turkiga anoo jooga ayaan maalin maalmaaha ka mid ah tegay xaafada Kizlaay Makhaayad ku taala oo Soomaalida magaalladaas degani u badan tahay.
Waxaan ku biiray oo aan la fadhiistay dhawr dhalinyaro ah Miis gaar ah isku waraysanaysa. Ilaa toban talaabo waxa noo jira- oday Soomaaliyeed oo muuqiisu tebinayo xaaladdo is-barkan oo ay ugu mudan yihiin da’, iyo Xanuun.
Odayga waxaa dhiniciisa taagan Wiil-dhalinyarro ah oo hadal u badan hiif iyo haaraan dudubinaya. Waxaan se fahmay inuu odayga la hadlayo markii uu si kulul oo la wadda maqlayo u yidhi isaga oo aan wax digigixasho ah lahayn, ‘Ee soo kac, hadaad meel fadhiyayso ood nasanayso ood xanuusanayso sariirtaadaad hurdi lahayde.”
Markuu intaas yidhi ayaan u sii fiirsaday odayga, waxaan wax aan xaalad xanuun lagu suuray karro markiiba ka arkay Labadda Adin (Cagood) oo aad u bararsanaa, isla markaana aan u qaatay ka sekow Cimriga uu jooggo inay sababta ugu weyn u yihiin talax-gabkiisa.
Yarku ma aamusine waa uu sii wadday hadalkii qalafsanaa. ‘Kolba meel baan ku nasanayaa hana odhanne soo kac,’ intayadii meesha fadhiday mar baan la wada hadalnay, waxaanan ku idhi “waar maxaa kaa qaldan- maxaad odayga waayeelka ah sidan ula hadlaysaa”.
Waxoogaa intuu aamusay isagoo I waji gartay ayuu igu yidhi, ‘Waar aniga dhibaa I haysta. haduu laba talaabo qaado waan fadhiisanayaa ayuu leeyahay- jidkan haduu ka gudbo oo uu jidkaa u gudbo ma socon karro ayuu leeyahaye, bal Ii waydiiya haddii aanu socon karayn, Muxuu guriga u fadhiyi waayay”.
Runtii intaan odayga ka naxay, in aan ka yarayn ayaan inanka u Naxay, ayaan cabaar hadallo waano ah u jeediyay.
Intii aan hadal ahaanta u idhi oo dhalinyaradda oo dhan ku wajahan, isla markaana, aan Hawraar ahaan u dhigay waxay tahay sidan:
Weli dunida maad caban
Kugumay cadaan tallo
Maad arag cidhiidhiga
Cidlo wehel kamaad dhigan
Wakhti caasha kuma sudhin
Dhibta maad cawaysimin
Qofay hayntu ciishoo
Wel-wel ciiray maad noqon
Cisha qudhana maalmuhu
Dacar kuma cabsiinoo
Cibro kuuma tabababarin
Cashar kuuma dhigin adag
Dadka caamo iyo mudan
Qof la cawlan maad noqon.
Cisigaagii muu lumin
Calafkaagu muu gudhin
Cawadaadu may dumin
Cidhibtaadu may go’in
Cududdaad ku faantiyo
Xoog iyo cadaankani
Cidlo kaagamay iman
Waxaad tahay curuuqaha
Cadka aabe laga jaray
Imisuu ku ciil tiray
Intuu dhiilka soo culay
Caano dhay ah kugu habay-
Caddaadiyo Qansaxa daran
Cagta qodaxda kaa jaray
Imisuu sir iyo caad
Cadka kaad u qalantiyo
Canbaar iyo mid quudheed
Si cadaana kuu baray
Koluu ceel biyood shubo
Koluu celiyo xoolaha
Koluu dhiso cariishyada
Koluu maydho calallada-
Koluu dharabka caynsado
Koluu daas yar calafsado
Koluu caday u soo guro
Koluu gaadhi gacan culus
Curuuquhu ku daalaan
Cimaarado rag leeyahay
Koluu ciid u kala rogo
Cisho kuuli laga dhigo
Camal baadi doonkii
Carabaha kol uu tago
Kol caruurta reer kale
Carbintooda loo diro
Kol al-baabka sii celi
Soo celi ku xoogsado
Si uu kuugu hello ceesh
Muxuu kuu caraaboo
Ceeryaamo iyo dhaxan
Dheddo caal madaw iyo
Cadeed iyo kul kuu maray
Cimidh kayna kuu galay
Caska waaga kuu kacay
Kuu guday cir-jiidhaha-
Inaad noqoto ciil tire
U xamilay cidhiidhiga
Ma adaa cadhoon kara
Ma adaa cadibi kara
Ma adaa cidlayn kara
Misna cunaha qaban kara
Eray qudha ku celin kara
Calooshaada oo madhan,
Weligii wax muu cunin,
Adoon caafimaad qabin
Cawdiisa kuma ladin
Isagoon ku ciidsiin
Dhar cusayba muu gadan
Cabsi iyo dagaal jira
Colaad kaagamuu tegin
Culays heer kastuu yahay
Niyad xumo kamuu celin
Itaal ceel kastuu dhigo
Caynaano muu dayn
Caabin hawl uu kuu galay
Cagtaa daalan muu odhan
Ceeb wixii aad leedahay
Calool maalin kuma qaban-
Xaajo kaa cawaran weli
Cid kumuu halayn kale
Isagoo aan cuud iyo
Camal iyo aduun hayn
Noloshuna cakiran tahay
Oo jeebku caydh yahay
Caanno maal kumuu gabin-
Waa ciroole taag daran
Culays weeyi ruux qaba
Gabaw caasha saaraa
Wuu lumay codkiisii
Wuu tagay cadkiisii
Wuu dheggo cusladoo
Caad fuule dhaayaha
Bukaan weeyi cuduriyo
Maaha caydi kula mid ah
Maaha caynka aad tahay
Haddii uu cag fududaa
Carrarka-na ku roonaa
Beri caafimaad qabay
Kaa mudan cisayntee
Damiir ceebta diidiyo
Caqli maanu kugu jirin
Yaa kaaga riday ceel
Cashar maanka koriyiyo
Ma waxaad ka tahay caydh.
Umuu soo ciyaar gudin
Duqan caguhu barareen
Tawsbuu la ciiree
Aabahaa ma cudurkaad
Caamiye nin liitaa
Hadal daran ku celiyoo
Cadaw mooda kii dhalay
Agtiisana ka caagoo
Karha oo ka cararee
Yaan cisayntu kaa gudhin
Waalid caasi ha u dhuran
Inkaar lagu casuumoo
Laga naco carshiga sare
Nin hortaa caasiyay
Waalidkiina ciil baday
Oon calaamo lagu ridin
Carro edeg laguma arag.
Caku waalid liitoo
Hadeer ciirsimaad biday
Curashashada ul jabasiyo
Waayeel culeys qaba
Marna lama canaadee
Cirkan kaa sareeyaa
Inuu caawa kugu dumo
Ama ciida hoosiyo
Dhulka caadil kula jaro
Cidhib laawe kaa dhigo
Maanad kaba cabsoonayn.
Ka curyaanto dhaayaha
Ama aad ciida miistoo
Xisku ku ciladdooboo
Waali tuurto calalada
Maanad kaba caboonayn
Dhacdo cusub ma waydoo
Nin u baxay cirkaa sare
Wakhtaa hoos u soo celin
Runta Caadka kaa koray
Waa Cibaaro kula taal
Iyo nabar culays lehe
Miyaad caafimaad qabi
Ku caraabin doonoo
Cajil iyo da’ baad noqon
Seediyo car jawdiyo
Wuu tegi cadkaagani
Beri-baad can buusnaan
Sida caday u dhuuban’e
Ha dhitaysan cuqubada
Adoon hadalka celin karin
Cawradaada dedan karin
Carabkaagu talax gabay
Kugu carigsan doonoo
Waad cabasha badatee
Kugu odhan caabaadkee
Yaan cadhada eebiyo
Cawri waalid kugu dhicin
Ku cuskannin inkaaruhu
Yaan cidhif laguu sudhin
Dadka yaad qof caanoo
Farta lagu cilaanshoo
Canbaarsan kuu garan
Carabkaagu yuu baran
Hadal caabuq keenoo
Yaan colaad u joogiyo
Ballo caashaq lagu qorin
Cadaab haw amaah guran
Ha ku noqon xumaha caan
Hana galabsan caalwaa
Ceeyoon labada dego
Ku casilo ILLAAHAY——-